China Akwụkwọ nri Akwụkwọ na-emepụta na ụlọ ọrụ | Nongchuanggang
Họrọ akụrụngwa ọhụrụ, nwere agba kwesịrị ekwesị yana akpachapụrụ anya na-enweghị ire ere.
Nhicha na blanching akụrụngwa na mmiri ọkụ ọkụ. Na-eme ka ihe dị jụụ dị jụụ na ngwọta maltose na pasent ụfọdụ. Wepụ akụrụngwa nke shuga na-ekpochapu, kpochapụ ha kpamkpam, ma kpoo ngwa ngwa na -18℃. Ọbụna tinye ngwa ngwa oyi kpọnwụrụ n'ime oghere ihe, jiri 120kg n'ime ite ọ bụla. Igwe mmanụ nke edere Lentinus bụ 85 ~ 90℃ na agụụ ogo bụ n'okpuru -0.095MPa. Mgbe ị na-eghe eghe, lelee site na oghere nchọpụta ma depụ mmanụ n'ime. A na-afụcha ngwaahịa ahụ site na igwe na-ekpochapu ngwugwu 1500g nke ngwaahịa n'ime igbe mpempe akwụkwọ aluminom. Tinye akpa nke deoxidizer, na akara. Bọchị mmebi dịka nkwekọrịta a chọrọ. A ga-echekwa ngwaahịa ndị gwụchara n'ụlọ nkwakọba ihe, ebe dị anya n'etiti mgbidi ga-abụ ihe karịrị 20cm. Ihu mmiri dị na ụlọ nkwakọba ihe agaghị agafe 50%.
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri bụ nri nri sitere na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi akpọnwụla n'okpuru ọnọdụ agụụ. Mkpụrụ osisi na akwukwo nri nwere "agbanweghị agbanwe atọ" - agba ngwaahịa, nri na uto anaghị agbanwe;
Enweghị mbelata, enweghị mmụba - ọ dịghị ihe a na-ewepụ na ngwaahịa ma e wezụga mmiri; Ngwaahịa anaghị agbakwunye naanị ihe ụtọ; Nnukwu oriri na-edozi ahụ, obere abụba - usoro njikwa njikwa HACCP dị elu nke mba, ojiji nke usoro ịmịcha mmiri nke mba abụọ, na-ejigide nri na-achọpụta na ihe ndị na-achọpụta na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri; Ndị na-anaghị afụ ụfụ na egheghị eghe - usoro mmepụta nke ngwaahịa a enweghị usoro puffing, na teknụzụ ọkụ dị ala nke na-eme ka mmiri ghara ịgwụ mmanụ iji zere usoro frying nke ngwaahịa ahụ. Mkpụrụ osisi na akwukwo nri dị iche na nri a na-afụ ụfụfụ dịka nri nduku, ọ ga-anọchi anya nri a na-afụ ụfụfụ dịka mkpụrụ nduku na nso nso.
.Dị Mkpụrụ osisi & akwukwo nri, nri
Mbido Akwụkwọ nri
Typedị nhazi N'ụdị
Udidi Siri ike
Afọ Ihe niile
Typedị Ihe Ngwakọta inine
Aha ngwaahịa Ngwakọta akwukwo nri
Nke gara aga: Taro
Pọpụl Nri Nduku
Karọt akpịrị ịkpọ nkụ